Björklund oo xoogga saaray is dhex galka iyo dhimista faqooqa maalka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Jan Björklund (L) sawir: Björn Larsson Rosvall/TT
Björklund: Ilmo walba waa inuu dareemaa dareenka Zlatiniismada
La daabacay måndag 28 augusti 2017 kl 17.02
Is-dhex galka iyo dhimista faqooqa dabaqadaha ayaa noqon doona su’aalaha uu xisbiga Liberalerna xoogga saari doono inta ka horreeysa doorashada sannadka foodda innagu soo haya. Iyada oo uu hoggaamiyaha xisbiga L, Jan Björklund axaddii ku qabtay magaalada Göteborg khudbaddiisii kuleeylaha.
–Annagu is dhiibi meeyno haddaannu nahay xisbiga Liberalerna. Sweden ma ahan inay kala googo’do. Sweden waa in la isku hayo, sida uu sheegay Jan Björklund, hoggaamiyaha xisbiga (L) mar uu khudbaddiisii kuleeylaha kaga hadlayay magaalada Göteborg axaddii shalayto.
Xorriyadda waa in la difaaco waxey ahaayeen ereyo ku qornaa miiskii uu hoggaamiyuhu ka khudbeenayay Halkaasina oo ey ku sugnaayeen dad boqol gaareya oo sacab la garab taagnaa Jan Björklund oo khudbaddiisii badankeed kaga hadlay faqooqa iyo farqiga dabaqadaha u dhexeeya.
–Sweden waa waddan uu farqiga dabaqadaha u dhexeeyaa sii kordhayo, dadka dalka ku dhashey iyo kuwa dibadda ku dhashey, sida uu sheegay Björklund.
Doorashada mowduuca ayaa la oran karaa inuu ahaa mid sumad u ah Göteborg. Magaalada Göteborg ayey ka tir-san yihiin 23 xaafadood oo boliisku ku tilmaamo xaafado tabcaan ah. Xaafado ey ku badan yihiin shaqa la’aanta, dunuubta, caafimaad darrada iyo natiija xumida iskuullada. Dhibaatooyin in muddo ah soo kobcayey, iyadoona uu Jan Björklund qirtay kaalinta uu ku leeyahay.
–Waxaa dhaleeceeynayaa siyaasaddii garabka Alliansen. Waxay ahayd in ka badan in la qaato siyaasaddii Liberalerna ee suuqa shaqada, in la abuuro shaqooyin sahlan ee adeegga tusaale ahaan qaar badan ee ka mid ah ajnabiga leh tacliinta hoose oo aan shaqo ka helin suuqa shaqada Sweden, maadaama inta badan loo baahan yahay shahaado iswiidhish ah, sida uu sheegay Jan Björklund.
Xalka uu khudbaddiisa kuleeylaha ku soo ban-dhigay Jan Björklund ayaa ah abuurista shaqooyin fudfudud oo u sahlaya albaabka suuqa shaqada sidii lagu geli lahaa iyo nidaamka iskuullada oo la hagaajiyo. Wuxuu sidoo kale carrabka ku dhuftay dhibaatooyinka xag-jir-nimada diinta iyo muhiimadda ay leedahay la dagaalanka cadaadiska ilaalinta sharaf-dhaca. Dhammaan dhallaanka Sweden waa iney dareemaan in la guuleey-san karo, sida uu sheegay Jan Björklund, hoggaamiyaha xisbiga Liberalerna mar uu axaddii ka akhrinayay khudbaddiisii kuleeylaha magaalada Göteborg.
–Dhallaanka oo dhami waa iney iska dhex dareemaan Zlataniismada. Waa inay riyoodaan oo dareemaan in riyooyinkuna rumoobi karaan, sida uu sheegay Jan Björklund.